Akhri: RW kheyre oo Carro kala duldhacay Madaxda Wasaarada Gaashaandhiga & Saraakiisha Millatariga… | Badweyn.com
Akhri: RW kheyre oo Carro kala duldhacay Madaxda Wasaarada Gaashaandhiga & Saraakiisha Millatariga…
R/wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre oo kulamo kala duwan Xafiiskiisa kula qaatay Madaxda iyo Taliyayaasha Militeriga dowlada ayaa ugu baaqay inay wax kabedelan howlaha shaqo oo ay u hayaan Qaranka.
R/wasaare Kheyre ayaa Madaxda iyo Taliyayaasha Wasaarada Gaashandhiga ku dhaliilay inaanu muuqan howlihii loogu tallo galay inay qabtaan xili uu dhowyahay wakhtiga ay qabsadeen in dalka looga saarayo Shabaab.
R.wasaare Kheyre ayaa Madaxda iyo Taliyayaasha u cadeeyay in dowladu ay mas’uuliyad buuxda iska saartay bixinta mushaaraadka ciidamada mid Caasimada ilaa Gobolada, lana doonaayo inay u hogaansamaan labada qodob ee kala ah:
1-In lagu shaqeeyo ciidamada Militeriga ee ku shaqada leh in dalka ay ka difaacan cadowga ka howlgala Gobolada dalka.
2-In la cadeeyo asbaabaha keenay in Madaxda iyo Taliyayaasha Wasaarada Gaashandhiga ka gaabiyaan howlihii loo jideeyay ee ahaa soo afjarida dhaqdhaqaaqa Shabaabka Gobolada dalka.
R/wasaare Kheyre waxa uu mas’uuliyiinta Wasaarada fursad usiiyay inay wax kabedelaan qorshaha caga jiidka leh oo ay ku shaqeynayaan iminka.
Geesta kale, Kheyre ayaa ballanqaaday inay is garabtaagi doonaan ciidamada loo diyaarinaayo inay cududa qabtaan Shabaabka ka arrimiya Gobolada qaar.